ओलीको यस्तो निर्णयले एमालेमा एकताको ढोका बन्द ? नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी बनाउन लागे यस्तो तयारीमा « Gaunbeshi
ओलीको यस्तो निर्णयले एमालेमा एकताको ढोका बन्द ? नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी बनाउन लागे यस्तो तयारीमा
काठमाडौ । नेकपा एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी एकताका लागि अहिले सम्म गरेका सबै प्रयास खेर गएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष नयाँ दल गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । अध्यक्ष ओलीसंग सहमतिको कुनै पनि सम्भावना नभएपछि नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी गठनमा लागेको हो ।
ओली पक्षबाट पार्टी क ब्जा गरेर मनोमानी रूपमा विधान संशोधन गर्दै सबै अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गर्ने प्रयास भएको उनले बताए । तर, पनि आफूहरू अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको र पहल जारी राख्ने उनले बताए ।
अन्तिम अवस्थामा पार्टी एकताबद्ध नभएको अवस्थामा छुटै दल गठन गरेर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प नभएको खतिवडाले बताए । ओली पक्षका नेताहरूले भने नेपाल पक्ष पार्टी एकतामा कहिल्यै पनि गम्भीर नरहेको र नयाँ पार्टी खोल्ने बहाना खोजिरहेको बताएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।